Waraaqda Muddada Caadiga ah ee Somalia
Waraaqaha Muddada Caadiga ah ee kujira Somalia
Ma u baahan tahay caawimaad qoris xirfadeed? Ka hel warqad tayo sare leh Waraaqda Muddada Caadiga ah ee ugu wanaagsan Somalia ku qoran dhammaan heerarka tacliimeed.
Adeegga Qorista Warqada Muddada Muddada ah
Haddii aad u baahan tahay warqad xilli-qorid caadadeed, waxaa jira shirkado iyo adeegyo badan oo diyaar u ah inay kaa caawiyaan arrintan. Waxaad ubaahantahay inaad marka hore go aansato nooca adeega aad rabto. Waxaad ka iibsan kartaa shirkad ama waxaad qori kartaa taada. Waa muhiim inaad waqti siiso isbarbardhiga xulashooyinkaan si aad uhesho ikhtiyaarka ugufiican baahiyahaaga. Waa kuwan qodobbo ay tahay inaad tixgeliso markaad raadineysid adeeg bixiyeyaasha warqad qoraal ah:
Waqtiga Waa inaad hubisaa in adeeg bixiyaha uu haysto waqti uu ku fuliyo amarkaaga. Tani waxay go'aamin doontaa inta aad ku dhamaanayso bixinta. Laguguma talin karo inaad shaqaaleeysid adeeg bixiye aan u furneyn kordhinta waqtigooda. Tani waxay kaliya kuu horseedi doontaa inaad lacag badan qarash gareyso oo aadan wali helin waraaqda aad ubaahantahay.
Nuqul. Hubso in adeegbixiyaha uu haysto nuqul qorayaal ku filan oo ay kuugu qoraan amarka adiga. Shirkad aan haysan nuqul qorayaal badan ayaan kugu filnayn. Waxaad u baahan tahay inaad hubiso inay haystaan ​​dad qoraya amarkaaga si amarka loogu qabto waqtigiisa.
Waqtiga dirida. Tani waa mid ka mid ah qodobbada ugu muhiimsan ee go'aamin doona sida ugu dhakhsaha badan ee amarku u socdo. Waa inaad hubisaa in adeeg bixiyuhu awood u leeyahay inuu ku bixiyo amarka taariikhda aad cayimay.
Aqoonta mawduuca. Adeeg bixiyaha qoraalka wanaagsan waa inuu aqoon u leeyahay mawduuca aad rabto inay wax ka qoraan. Tan macnaheedu waa inay aqoon u leeyihiin maadada iyo sooyaalka. Haddii aadan taas cayimin, markaa iyagu ma siin karaan hanuun habboon mowduucyada ay wax ka qorayaan mana ku siin karaan maqaallo wanaagsan.
Khibrad. Khibraddu aad ayey muhiim u tahay haddii aad rabto inaad hubiso in adeeg bixiyahaaga qoraalka uu gaarsiin karo qodobbada ugu fiican. Waa inaad hubisaa inay khibrad u leeyihiin qorista mowduuca aad uga baahan tahay inay wax ka qoraan. Markay khibrad u leeyihiin, ayaa ka fiican qodobbada ay soo saari karaan.
Macluumaadka xiriirka. Markaad raadineyso adeeg qoraal, waxaa muhiim ah inaad marin u hesho macluumaadka xiriirkooda. Tan macnaheedu waa inaad hubiso inaad la xiriiri karto markasta oo aad su'aal ama dhibaato aad kala kulanto adeegga. Tani waxay kaa caawin doontaa haddii ay jiraan wax dhibaato ah inta lagu jiro hawsha qorista adeegga qorista.
Waraaqaha xilli-qorista ee caadiga ah waxay noqon kartaa caqabad in la qoro, laakiin sidoo kale way fududaan karaan in la qoro. Haddii aad kiraysan doontid adeegsi qorista erey-bixin muddo cayiman ah, hubi inaad qabatay dhammaan waxyaabihii lagaa rabay inaad sameyso si hawshu kuugu fududaato. Kaliya waxay kugu qaadan doontaa daqiiqado yar oo waqtigaaga ah inaad shaqada qabato. Xusuusnow inay muhiim tahay inaad saxdo.
Adeegga qoraalka wanaagsan waa inuu lahaadaa xirfado isgaarsiineed oo wanaagsan. Waa inay awoodaan inay kula xiriiraan si wax ku ool ah. Sidoo kale waa inay ku dareensiiyaan inaad xasiloon tahay inta aad waxyaabaha kala hadlayso iyaga. Waxaad ubaahantahay inaad lasocoto qofka kashaqeynaya mashruucaaga. Xusuusnow inaad xoogaa isdhexgal ah la yeelan doontid qofkaan, waana inaad ogaataa sida ay kula xiriiraan adiga iyo sida ay ula macaamili doonaan baahiyahaaga.
Adeegga qoraalka wanaagsan sidoo kale waa inuu noqdaa mid saaxiibtinimo leh. Waa inaadan waligaa dareemin inaad mooddo inuu qoraagu isku dayayo inuu kugu cadaadiyo inaad wax qabato. Adeeggu waa inuu sidoo kale fahmaa inaad ku sugan tahay xaalad dhaqaale oo laga yaabo inaad wax uun u hurto. Markaad raacdo adeeg wanaagsan, waxaad arki doontaa inay ixtiraamayaan go'aankaaga oo ay isku dayayaan intii karaankooda ah inay ereyga warqad kuugu fududeeyaan inaad fahamto oo aad ku soo gudbiso waqtigeeda.
Waxaa jira qoraayo badan oo halkaa jooga kuwaas oo kufiican qorista warqad xilliyeed. Waa arrin uun in la helo. Ma aha inaad shaqaaleeysid qofka ugu horeeya ee kula soo xiriira. Xaqiiqdii, haddii aad doorato inaad adeegsato adeeg qoris, waxaad u baahan kartaa inaad haysato in ka badan hal qoraa oo ka shaqeynaya mashruuca. Sidan, haddii aad wax su'aalo ama walaac ah qabtid, waxaad la xiriiri kartaa in ka badan hal qof oo aad ka heli kartaa jawaabaha aad u baahan tahay.
Sidaad arki karto, farqi weyn ayaa udhaxeeya qorista warqada ereyga caadada ah iyo waraaqaha ereyada caadiga ah. Waraaqahaani way ku adag yihiin dadka intiisa badan inay qoraan, waana ceeb haddii aad shaqaaleyso adeeg qoraal oo isku dayay inuu soo gudbiyo waraaqahaas iyada oo aan si fiican loo fahmin iyo tababar. Waxaad u baahan tahay inaad shaqaaleyso qof garanaya waxa ay sameynayaan. Ha u ogolaan naftaada inaad noqotid dhibane adeeg tayo qorista waraaqda.